कतै कण्डम किन्दा यस्तो गल्ती त गर्नुहुन्न ? - Everest Dainik - News from Nepal
कतै कण्डम किन्दा यस्तो गल्ती त गर्नुहुन्न ?
याे पनि पढ्नुस स्वास्थ्य मन्त्रालयले कन्डम बाँड्ने, गृह मन्त्रालयले अपराधी ठान्न्ने ?
याे पनि पढ्नुस अस्थायी साधन किन प्रयोग गर्दैनन् किशोरकिशोरी ? मुख्य कारण यस्तो रहेछ